စိတ်၀င်စားလို့ပါ - MYSTERY ZILLION
November 2010 edited November 2010 in Laptops & Notebooks Sale
အခုတလော ဂျာနယ်တွေမှာ တွေ့နေရတဲ့ Apad ဆိုတဲ့ android pad (ipad clone ) ကိုစိတ်၀င်စားနေတယ်ဗျာ။ ၀ယ်ရင်ကောင်း မလားလို့။ china က၀င်တယ်ဆိုလား။
ကျနော်သိချင်တာက pdf file တွေဖတ်လို့ရပါသလား။ သုံးရတာအဆင်ပြေ ရဲ့လား။ ပျက်ရင် ပြင်လို့အဆင်ပြေနိုင်ပါသလား။ကျနော် internet, e-book,multimedia တွေ အဓိကအသုံး ပြုချင်ပါတယ်။
Apad နဲ့ပတ်သက်ပြီး သုံးဖူးသူများ၊ သိသူများ အကြံပေးပါအုံး။
Installing adobe reader will enable you to read pdf files.
Like all Android, it isageek thing. You can use it as it is or you can flash the firmware. It's all your choice. However, I'd recommend those tablets found in mp4nation.net. They say, "We encourage installing custom roms." So better support I think.
thank you sir !:rolleyes: